Soro ndị isi Social Media na - emetụta 2014 | Martech Zone
Soro ndị isi Social Media na - emetụta 2014
Tọzdee, Septemba 4, 2014 Tọzdee, Septemba 4, 2014 Douglas Karr
Dr. Jim Barry nke Edu-Tainment Social Content Marketing blog etinyegoro a ndepụta nke ndị mgbasa ozi mgbasa ozi kachasị elu (na nke gị n'ezie na ya!). Ezi dọkịta ahụ edeela ihe na-adọrọ mmasị, nkọwa zuru ezu na 4 archetypes nke ndị a, na-akọwa àgwà na ụdị mmetụta ha nwere na ụlọ ọrụ ahụ, gụnyere:
Ndị nkụzi - nye aka na nghọta
Nkụzi - tinye aka ma nyere aka (ị ga-ahụ m ebe a!)
Entertainers - tinye aka ma gbaa ume
Ihe ndi mara mma - nye nghọta na mmụọ nsọ
Ọ bụ nnukwu ndepụta na Isiokwu bụ ihe ga-agụ. Enwere m ekele na edepụtara m dịka nchịkwa. Anaghị m eche banyere onwe m dịka onye ndu echiche na ụlọ ọrụ ahụ, mana echere m na m bụ onye na-eme ihe n'eziokwu ma nye blog nke na-enyere ndị na-ere ahịa aka ịchọpụta ngwaọrụ na usoro ọhụụ maka imeziwanye ọrụ ha. Ekwuru m hoo haa na ọkwa nke onwe m, ka nke ahụ nwee ike imetụta ikike m na nnabata m. Kedu ụzọ ọ bụla, enwere m nsọpụrụ ịnọ n'ụdị ndepụta a dị egwu.
Echere m na ọ ga-adị mma ime ka ọ dịrị gị mfe ịgbaso ndị folks a, ya mere, lee ndepụta ahụ na bọtịnụ ntinye Twitter ha!
Soro @ webby2001
Soro @ SocialMedia411_
Ihe ndi mara mma
Enwetara m na akaụntụ Twitter nke blog anyị site na nke m. Wepu arụmụka na-abaghị uru na akaụntụ Twitter m ma hapụ gị Martech ZoneOnyekwere Hehe.
Tags: 2014Andrea nwana tranaugie rayBrian Carterbrian halliganbrian solisbryan kramercarl ramalloadọrọ adọrọchris abrahamChris broganugwu ugwu ravenscraftndị nkụzidara ụdadave kerpendave morindavid armanodavid meerman scottNwachukwu karrdouglas karrDr. Jim Barrynkuzindị nkụzindị ọbịaerik qualmangary vaynerchukgeoff Livingstongina schreckRubin gretchenGuy kawasakijason keathJason millerJay Baerjeremiah owyangjessica northeyJoe PulizziJoel commjohn battellejohn P Aguiarjonathon colmankim garstkoka sextonLee OddenLewis howesLinda Sherman Gordonlori ruffhụrụ gị n'anyamarsha collierMichael Britomichael chikezieMichael Stelznermichele smorgonmitch joelpat flynnpeter shankmansimmons bara ọgaranyarobert na -ekwu okwuscott egoChebe Israelna-elekọta mmadụ ọdịnaya ahịasusan gilbertterezie kyselovaTom websterndị isi na-eme ihe iken'elu mgbasa ozi mgbasa ozindị na-elekọta mmadụ mgbasa oziTwitterzbynek kysela
Chọpụta ụzọ nke ịtụgharị ndu na ahịa